कठपुतली बनिरहेको देश नेपाल – Chitwan Post
कठपुतली बनिरहेको देश नेपाल
केही वर्षअगाडि प्रकाशचन्द्र लोहनीको एउटा लेख पढेको थिएँ । त्यो लेखको एउटा टुक्का ‘कागजको पुतलीलाई चटकेले धागोले अल्झाएर नचाएको दृश्य’ थियो । त्यो धागोमा नाच्ने पुतली थियो– ‘नेपाल सरकारको गिरोह’ । नेपालभित्रै पनि यदाकदा शब्दहरु निस्कन्छन् र सुन्ने गरिन्छ– ‘नेपाल सरकार चलाउने शक्ति अर्कै छन् ।’ यस्ता अप्रिय शब्द वा वाक्यहरु सुन्दा म झस्कन्छु र ब्युँझन्छु, के म चिताबाट ब्युँझिएको मान्छे त होइन ? तर, यी अवाञ्छित क्षणहरुबाट निद्रामा परेझैँ बिर्सन्छु । सामान्य विधि–व्यवहारतिर घुलमिल हुन्छु । आफ्नै देश, आफ्नै परिवेशसँग रमाउँछु पनि । फेरि सामान्यबाट असामान्य तिथिमितिले घाँटी चिसो पार्ने छेस्को बिझ्न आउँछ ।
ऋषि धमलाले खोइरोले उधिनेर अन्तर्वार्तामा मणि थापासँग बोल्दा ‘खोइ यो सरकार स्वदेशीले हो कि विदेशीले चलाएको ? बुझ्नै सकिएन !’ एउटा पत्रकारजस्तो बुझ्नेले हरिवंश आचार्यलाई प्रचण्डसँग कुरा गर्न लगायो । प्रचण्डको आवाजचाहिँ यो पङ्क्तिकारलाई क्यारिकेचरको स्वरजस्तो आभास भयो । हरिवंशले प्रचण्डसँग कुराको थालनी ‘हाम्रो सरकार त हामीले चलाएको होइन क्यारे ?’ भने । यी र यस्ता कुराभन्दा पनि स्पष्टै भन्नुपर्दा भारतको अघिल्लो निर्वाचनमा भाजपाको एकलौटी बहुमत आएपछि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेको तुरून्तै नेपाल भ्रमण गर्ने घोषणा गरे । परराष्ट्रमन्त्री शुष्मा स्वराज नियुक्त भइन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निम्ति शुष्मा स्वराज जानकारी लिन आउँदा उनी बोलेकी थिइन्– दिल्ली सरकार आपूm नेपाली सरकारसँग कुरा गर्दैन, कर्मचारीसँग मात्र कुरा गर्न लगाउँछ । कर्मचारी भनेको भारतको गुप्तचर विभाग हो । नेपाली नेता पहिले ‘र’ को सदस्यता लिएरमात्रै सरकार चलाउन मान्यताप्राप्त बन्छन् भन्ने प्रशस्तै बजारमा हल्ला सुनिन्थ्यो, हुन पनि हामीले भोगेका जहाँतहाँको विधि–व्यवहारले होइन होला भन्न पनि नसकिनेझैँ लाग्छ, जस्तोः ‘भारतीय बाँधको कारणले तराई डुब्यो’ शीर्षकको अन्नपूर्ण पोष्टको । खासखास बोल्ने सबैले त बोलेकै छन्– ‘भारतको पक्की बाँधले नेपाल डुब्यो ।’
नेपालले भोगेको अर्बौंको क्षति बेहोर्नु परेको तथ्य र सत्य कुरामा भारतसँग बोल्नै डराउने किन ? के २०४६ सालयताका नेपाली नेता कुनै पनि अन्यायमा मुख नै नखुल्ने गरी भारतको अनुदान खाएका छन् त ? भारतलाई आपूm पालिने दाता ठान्छन् ? भारत रिसाए आफ्नो इज्जतमा बट्टा लाग्ने डर हो ? ससुरा, ज्वाइँ, काका, मामा, बाबुबाजेको पुर्खा, कुनै हत्या अभियोग भोगेका छन् र बदलामा जाकिएला कि भन्ने कारण छ त केही ? यदि केही कारण छैन भने नेपाली भूमिभन्दा तीन मिटर अग्लो पक्की बाँध बाँधेको छ, जमेको पानी छिर्ने प्वाल कतै छैन । आँखा नदेख्नेले हातले छामेर पनि ठम्याउन सकिन्छ, भारतीय बाँध र नेपाली जमिन । पत्ता लाग्न सक्छ भारतले नेपाल डुबाएको हो कि होइन ? तर, किन लाटोकोसेरो बनेर नेपालीको जिम्मा लिने निकायले नेपालीलाई बिजोग पार्ने ? जिम्मा लिनेले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा जिम्मेवारी अर्कोलाई बुझाउनुपर्छ कि हत्ते हालेर त्यो ठाउँमा खुर गाड्ने ?
विगत र वास्तविकतामा आगत अवलोकन
जीवनको वास्तविक लक्ष्य !
बढ्दो शैक्षिक विसङ्गति
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा पढेँ– ‘कोशी उच्च बाँधसम्बन्धमा कुरा मिलेन ।’ नेपालले भन्यो– अहिलेको अवस्थामा यो बाँध अघि बढ्न सक्दैन । भारतले भन्यो– अघि बढ्नैपर्छ । यो विवाद अहिले यत्तिकै स्थगित भयो । भनाइ छ– सरकारको उपल्ला निकायको निर्णयमुताविक विषयको टुंगो लाग्छ । यो पङ्क्तिकारको बुझाइमा यदि उपल्लो अर्थात् प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै समाधान गर्नुपरेमा गरूडको छायाले गुँडुल्किने यो प्राणी हो, नेपाली सिंगै डुब्छ भने पनि डुबाउनुको विकल्प छैन । तर, तीन करोड नेपाली डुब्ने नै घडी ठिंग उभियो भने एउटै सपूतले पनि डुब्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । पहिलो प्रश्न– यसको बस्तुस्थिति बुझोस् । कोशी नदी नेपाली हिमालबाट बग्छ । युगौँयुग प्राकृतिक नियमपूर्वक बग्दै थियो । यो देश व्यापार घाटाले टाट परेको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोशीजस्तै सबै नदी विनालाभ थुनेर भारतले सिंचाइ र विद्युत्ले झिलीमिली र हराभरा पारेको छ, तर नेपाल सुख्खा छ छुट्टै कुरा हो । २०६५ सालमा कोशीले नेपाली भूमि र नेपालीको बिल्लीबाठ भए, तर भारतको बनिबनाउ यथावतै छ । नेपालीको बिल्लीबाठ उतार्न अहिलेसम्म चासै राखेनन् । न बास न गाँस, नेपाली दस÷एघार वर्षसम्म आशैआशमा घिटीघिटीमा छन् ।
आजसम्मको अवस्थाबाट कोशीलाई भारतले तीन सय मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने योजना छ । चौध अर्ब घनमिटर पानी जमाउने पोखरी बनाउने योजना छ । यो पानी भारतको सुख्खा भूमि पल्लो छेउसम्म पु¥याउने, बिजुली निकाल्ने, दक्षिण भारत झिलीमिली पार्ने । सुख्खा भूमि हरियाली बनाउने, अन्न वा सबै वस्तु उत्पादन गर्ने । यो बाँधले नेपाली भूमि धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभाजस्ता जम्मा नौ जिल्ला डुबाउने, लाखौँ जनता उठ्नैपर्ने । तैपनि, नेपाली यो अवाञ्छित संकटबाट ढुक्क बाँच्न पाउने स्थिति सहज छैन, किनभने त्यो प्रशान्त महासागरजस्तो जलकुण्ड शान्त बस्नै सक्दैन । यो छचल्किन्छ । त्यसको छाल चौबिसै घन्टा छचल्किँदा छ महिना, छ वर्ष वा अल्पायुमा नै यो चुरेको कमजोर माटो ध्वस्त भैहाल्छ । भत्किँदा सखापै हुन्छ । नेपालमात्रै होइन भारतै डुब्ने र बग्ने हुन्छ । पूर्वी तराई नामेट हुनेमा शंकै गर्नुपर्दैन । डुबेका नौ जिल्लामात्रै होइन १२–१५ जिल्ला नै सारिन सक्ने अवस्था बन्नेछ, त्यसैले अहिले पूर्वका राई, लिम्बूहरुले ढुंगामुढा गरेर बचाएका छन्, तर नेपाली जनतासँग सरोकार नराख्ने, भारतको अन्धभक्ति भजाउने सरकार नामका निकाय सेना लगाएर पनि भारतको उपकार गर्न जहिल्यै तयार छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सही ठोक्ने पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । शेरबहादुर दोस्रा भनिन्छ । माधव नेपाल र झलनाथ को–को हुन् अल्लि प्रस्ट भएन ।
खबरमा उल्लेख छ– ‘यतिबेला व्यापार घाटा १३ खर्ब र २१ अर्ब अरे । व्यापार घाटा भनेको किनेरमात्रै खाने, बेच्ने केही नहुने । बेच्ने वस्तु नभएपछि राष्ट्रको कुनै अंग बेच्नुप¥यो कि परेन ? सो अवस्थामा कि टाट परेको घोषणा गर्नुप¥यो कि सित्तैमा खाएको नदीनालाबाट मूल्य राहतका लागि मुख बाउनुप¥यो । राष्ट्र टाट पार्न तयार हुने, आफ्नो सम्पत्तिको दुरूपयोग बचाउन तयार नहुने ? आँट नगर्ने ? कोशी नदीबाट नेपालले ठूला–ठूला घाटा बेहोर्दै छ । त्यस्तो घाटा र मार आफ्नै पानी, आप्mनै नदीनालाबाट व्यहोरेर पनि टाट पर्ने अवस्थातिर लम्किरहेको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न कोशी नदीको मूल्यांकन किन नगर्ने ? मूल्यविना सम्पत्ति बेच्ने नीति र चलन धर्तीको कहाँ छ ? र, हामीले विनामूल्य सम्पत्ति बाँड्ने ? यसको जवाफ राष्ट्रलाई, राष्ट्रको जनतालाई अनिवार्य दिनुपर्छ । यी नदीनाला वा राष्ट्रिय धनको दुरूपयोग गर्ने त अर्कै परे, तर अहिलेको संकट बेहोर्ने देश सञ्चालन गर्ने जिम्मा केपी ओलीले लिएका हुनाले उनले नै चार ठूला नदी कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीको नवीकरण, मूल्याङ्कन र अवधि तोक्ने कार्य छातीमा मुड्की बजारेर पनि आँट्नैपर्छ । योमात्रै एउटा प्रमुख स्रोत हो व्यापार घाटा पूर्तिको । के यो कुरा जायज छैन ? यी नदीनाला नेपालका चोखा सम्पत्ति होइनन् र ? तर आश्चर्य छ ! नेपालको कुनै दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र सम्पूर्ण जनता यस उपर किन चुप छन् ? के राष्ट्र टाट पल्टेको हेर्न पर्खिराखेका हुन् ?
१३ खर्ब २१ अर्ब व्यापार घाटा हुँदा १ खर्बसम्म पनि निर्यात नहुनुमा आश्चर्य लाग्दैन सम्पूर्ण देशवासीलाई ? यो पङ्क्तिकारले भन्दै र लेख्दै आएको के हो भने हाम्रो नक्कली मित्रता पनि नेपाल टाट पार्न रूचाउने अंग हो । जबसम्म यो नक्कली मित्रता सक्कलीरुपमा भित्रैदेखि परिवर्तन हुँदैन तबसमम यो देशका जिम्मेवार निकायको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पनि ढाँट र कपटपूर्ण नै ठहर्ने छ । जस्तैः यहाँ पाइपलाइनमा तेल पठाउने र नेपाली भूमिलाई तीन मिटर अग्लो बाँध बाँधी विनानिकासी बुढाएर समाप्त पार्ने । तर, मित्रतामा आँच आउला भन्ने डरले मुटु कमाएरै, आफ्नै कमजोरीले डुबानमा परेको भन्दै थाप्लो ठोक्ने नेपाली छन् । कोशी बाँधले नेपाल बग्यो, ६५ सालमा अर्बौंको क्षति भयो, हजारौँ जनता सुकुमबासी भए । खोइ तिनलाई क्षतिपूर्ति ?
दस वर्षअघि नेपाली गलैँचाले डलर भिœयाउन सुरू गरेकै हो । मित्रतालाई के आँच पस्यो भने ‘लौ अब यो छोटा देश अघि पर्ने भयो ।’ उपाय के त ? बुन्न थाले तानाबुना । त्यो उद्योगमा आँच नपसेको भए अर्बौंको निर्यात व्यापारको सम्भावना थियो । नेपाली सक्कली मित्रतामा नक्कली मित्रता घुस्न थाल्यो र समाप्तै पारिदियो । कतिपय तरकारी पनि पैठारी नभएका होइनन्, तर नेपाली किसानलाई १०÷२० ठाउँमा जाँच्न घुमाउने, हैरान पार्ने तब तरकारी सुकिसक्छ र भनिन्छ– सडिसक्यो । नेपाली चिया–कफी जान्छ, राम्रो जति छान्ने भारतीय मार्का लगाउने, बिग्रँदोलाई नेपाली बनाएर बदनाम बनाइदिने । अलैँची फस्टाउन खोज्यो कि अनेक बहाना गर्ने र मूल्य घटाउने गर्दै नेपाली अलैँची अहिले किसानको घरमै थन्किएको छ । अदुवाको कथा पनि उस्तै–उस्तै नै छ । यसरी नक्कली मित्रताले बिरालो र मुसाको जुनी भोग्नु परेको छ, यो कर्मचारीले खेलाएको देशलाई ।
खोइ केपी ओलीले उत्तरी नाका खोल्छ भनेका थिए, त्यो नाकाको सामूहिक यात्रा गर्न पाए व्यापार घाटा अवश्य नै घट्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यात्रा उत्तरी नाकाको ढोकाबाट सामुद्रिक बाटो खुल्यो भने भूपरिवेष्ठित देश पनि रहँदैन नेपाल । नक्कली मित्रताको नाकाबन्दी वा कुनै बन्दीको त्रासमा बाँच्नुपर्ने दिन पनि समाप्त हुन्छ । आँट आउला नक्कली मित्रहरुको मर्जी पालना नगरी उत्तरी नाका स्वतन्त्र बनाउन ? संकटकालको झोँकमा खुलाउन आँटेको नाका पूर्णरुपले सञ्चालन गर्न सके केपी ओलीको एउटा क्षमताको कदरचाहिँ निश्चय नै गर्ने थिए देशवासीले ।
घरघरमा स्वच्छ खानेपानीका लागि पहल
फुटसलको खेल तालिका सार्वजनिक
माधवराज सुमार्गी कपको विजेता कलैया
बागमती गोल्डकप फागुनमा हुने
फागुन ५ गतेबाट राइनोकप फुटबल